काठमाडौंमा चल्ने सवारी साधनमा आज देखी सरकारले लगायो यस्तो नियम, हेर्नुहोस ! - Nepali in Australia
March 30, 2021 March 30, 2021 autherLeaveaComment on काठमाडौंमा चल्ने सवारी साधनमा आज देखी सरकारले लगायो यस्तो नियम, हेर्नुहोस !
काठमाडौं : उपत्यकामा कोभिड–१९ को जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कडाइ गर्ने भएको छ । अघिल्लो वर्षजसरी नै सरकारले कोरोना सं`क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कडाइ गर्न शु`क्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुबीच छलफल गरेको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भारतमा कोरोनाको सं`क्रमण दर बढ्दै गएको र नेपालमा पनि बढ्ने सम्भावना देखिएकाले पूर्वसावधानी अपनाउने निर्णय भएको जनाएको छ ।
शुक्र`बारको बैठकले सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाइ यात्रा गर्ने यात्रुलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
भाकल के हो, के भाकल गरे पछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ जान्न जरुरी छ! बैज्ञानीक कारण एक पटक अवश्य पढ्नुहोस्